Rahoviana ary ahoana no fomba handrafetana ny tulipa aorian'ny voninkazo - Voninkazo - 2019
Angamba ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny lohataona rehetra dia ny fotoana iveloman'ny tulips. Ireo zavamaniry tsara tarehy ireo no mampahafantatra antsika momba ny fahatongavan'ny lohataona. Ny hafaliana toy ny tulips, te-hampitombo isaky ny vanim-potoana aho, izany no mahatonga ny mpamboly voninkazo hamorona fomba iray hitahiry voninkazo mandra-pahatongan'ny lohataona manaraka amin'ny alàlan'ny fanangonana tulips aorian'ny fandalinana. Momba ny fotoana handrafetana tulips sy ny fomba hitehirizana azy ireo dia hiresaka amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Rehefa mila mandavaka ireo biriky ianao
Ahoana no fomba handravahana ny tulip bulbs
Ahoana ny fametrahana biriky tulip
Mila mila mandavaka tavoahangy tulip aho
Raha efa niposaka ny tulipa - matetika ny faran'ny May - fanontaniana manan-danja iray: inona no tokony hatao amin'ny tulip ny voninkazo aorian'ny voninkazo? Ankehitriny dia misy dikan-teny marobe momba ny fandrakofam-bolo ireo tulip bubbles, ary tsy misy vahaolana lavabe amin'ity olana ity. Misy karazana sasany, ohatra, ny Hybrid Darwin, Triumph, Foster, Kaufman, izay azo havaozina amin'ny tany, saingy tsy dia malaza loatra izy ireo. Matetika, mazava ho azy, dia nopotehina ny fantson-tsakafo. Nofaritan'izy ireo ihany koa ireo biriky mba tsy hanaparitahana ny voninkazo, fa mba hampitombo azy kokoa. Raha tsikaritrareo fa misy voninkazo maro kokoa eo am-pandriana, ary efa "tsara" ny toerana, tsara kokoa ny mandady ampahany amin'ny tulip bulbs ary manodina azy any amin'ny toerana hafa. Ny antony iray hafa manoloana ny filaharam-pambolena dia ny fangalovana ny tanimboly mitaky tontolon'ny tany ho an'ny voninkazo be dia be, ary raha mitoetra mandritra ny taona maromaro ny voninkazo, dia miteraka kely kokoa ny voninkazo.
Fantatrao ve? Arakaraka ny itomboan'ny tongolobe amin'ny toerana iray, dia mihalalina kokoa izy io, ary tsy afaka mitombo amin'ny tany matevina ny tifitra vaovao.
Mba hahafahan'ny tsiranoka haniry ny taon-dasa, dia mila mihodina amin'ny fotoana mety izy ireo ary voatahiry amin'ny toe-javatra mety.
Azo atao ve ny mandavaka tulips aorian'ny fivalanana? Ny voninkazo dia hampahafantatra anao izany. Amin'ny loko sasany, ny ravina dia ho malambo, fa mbola maitso - tsy mila manelingelina ireo zavamaniry ireo, fa raha mihoatra ny antsasaky ny ravina dia mavo mavo ary mivoaka - afaka manodina ny tulip toy izany.
Zava-dehibe izany! Mba hahafahan'ilay jiro ho matanjaka, dia ilaina ny manapaka ny lohan'ny voninkazo alohan'ny hamafazana ny voa.
Raha toa ka mihodina ny ampahany amin'ny tulips ao amin'ny efitrano fatoriana dia efa nihady teo aloha, ary ny ampahany hafa taty aoriana dia aza manahy fa ara-dalàna izany. Zava-dehibe ny tsy mamoy ny vanim-potoana rehefa mila mandavaka zavamaniry ianao, fa tsy mandehandeha koa. Raha toa ianao ka "tara" amin'ny fikarakarana, dia misy ny fahafaha-manala ny biriky, ho lasa malemy ary mety tsy ho tafarina amin'ny taona manaraka; Ny vokatra iray hafa amin'ny fivalozana loatra dia tsy ho azonao atao ny mamoaka ny tongolobe faran'izay kely amin'ny tany. BMba hisorohana ny olana toy izany, ny mpamboly sasany dia manolo-tena hamboly ny tany eo amin'ny toerana izay nitomboan'ny tulipa - handrava ireo kibay kely indrindra ary hamonjy anao amin'ireo tsy mila. Raha, maika kosa, faingana, dia afaka manangona voninkazo iray izay tsy mbola matanjaka, izay mety tsy ho tafavoaka amin'ny ririnina.
Ho an'ny fizahozahoana dia tsara kokoa ny misafidy andro iray rehefa hafanana sy ho maina ny toetrandro. Mba tsy hanimbana ireo biriky dia tsy maintsy atao ny mivalom-pasika mandritra ny fikarohana. Ny lelavola dia tsy "mandositra" anao, fa tsy afaka manala azy avy eo. Raha toa ka nitranga ny toetr'andro dia voatery nandavaka tamin'ny toetr'andro be orana, na hitanao ny fahavoazana amin'izany, dia tsy maintsy entina amin'ny vinaingitra iray ny vovobony toy izany ary ho maina tsara. Raha "marary" ilay jiro, dia tsy maintsy aparitina amin'ny ambiny, biriky mahasalama izany.
Fantatrao ve? Mba hahatonga ilay jiro tsy "handositra" ary tsy ho simba, ny tulpen dia nambolena tao anaty tamba-javasara (afaka mampiasa harato iray avy amin'ny ovy) na boaty zaridaina (tsy dia malaza loatra izy ireo satria sarotra loatra).
Mandritra ny roa andro aorian'ny fandobohan-drano, dia simbaina ny ravina sy ny mizana fotsy, ary maina amin'ny masoandro, ary avy eo miditra any amin'ny efitrano ary voatahiry amin'ny hafanana 25 ° C farafahakeliny, tokony ho 70% farafahakeliny ny haavo. Mihena tsikelikely ny hafanana, manomboka amin'ny volana aogositra: tokony ho 17 ° C ny mari-pana farany. Ny biriky madinika dia azo sakanana amin'ny fanantonana azy ireo amin'ny kitapo, raha lehibe ny biriky, tsara kokoa ny mampiasa boaty, satria lehibe kokoa ny faritra misy azy, ary ny tirozy dia tsy te hifanakaiky loatra.
Zava-dehibe izany! Raha manapa-kevitra ny hitazona ireo biriky ao anaty boaty ianao, tsara kokoa ny manamboatra azy ireo amin'ny 20-30 cm ambonin'ny haavon'ny tany mba tsy hahatongavan'ny totozy.
Sarotra be ny mitahiry ireo biriky, fa raha misy zazavavy tulipana eo amin'ny tadidy, ny fanontaniana dia ny tokony hatao amin'izy ireo. Ny fiainana an-davitr'ireo biriky miaraka amin'ireo zazakely dia kely dia kely, maina maika haingana, ary ny zaza dia afaka maina mandritra ny andro vitsivitsy. Misara-kevitra ireo fomba fikarakarana ny ankizy: misy mihevitra fa tokony hambolena aloha ny tongolobe noho ny an'ny hafa, ary dia afaka mitombo izany; Ny olona iray dia mipetraka miaraka amin'ny ambim-bava rehetra ary miandry 2-3 taona mialoha ny voninkazo. Tsara kokoa ny manamboatra tongolo toy izany amin'ny volana aogositra ary manangona kely ny tany amin'ny humeo mba "handrakotra" azy ireo amin'ny ririnina.
Araka ny hitanao, mora ny mikarakara ny tulip bulbs ary mitazona azy ireo amin'ny fambolena an'io "voninkazo mirakitra" io - ny zavatra manan-danja indrindra dia ny manao zavatra tsikelikely. Zava-dehibe indrindra ny hikarakarana tsara ireo biriky varimbazaha sarobidy, mba hahafinaritra ny fandrianao ny fandrianao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fomba hikarakarana ny tulips rehefa miposaka izy ireo, ny dingan'ny fitehirizana voninkazo iray